Wararkii ugu dambeeyay ee xiisada Galmudug – XAMAR POST
Wararkii ugu dambeeyay ee xiisada Galmudug
By Mohamed Ahmed Last updated Sep 27, 2017
Xiisada Siyaasadeed ee ka taagan magaalada Cadaado oo xarun KMG u ah maamulka Galmudug ayaa kor u sii kacday kadib markii xildhibaano sameystay shir guddoon KMG ah oo shalay gelinkii dambe ku kulmay Hotel magaaladaasi ku yaalla ay sheegeen in ay xilkii ka qaadeen Axmed Ducaalle Geelle (Xaaf).
Xildhibaanadan oo sheegay in tiradooda ay gaareyso 55 ayaa sheegay codeyn la sameeyay in 52 xildhibaan ay ogotaalatay xil ka qaadista Madaxweyne Xaaf, labana ay diiday, halna uu ka aamusay.
Sidoo kale xildhibaano kale oo ka tirsan Baarlamaanka Galmudug oo uu shir guddoominayay Guddoomiye ku xigeenka koowaad ee Baarlamaanka Galmudug ayaa sheegay xil ka qaadista Xaaf in ay tahay been abuur, sidoo kalena aan sharci aheyn.
Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaalle Geelle (Xaaf) ayaa sheegay in aysan jirin wararka sheegaya in xil ka qaadis lagu sameeyay, arrintaasna ay ka dambeeyeen dad dano gaar ah ka leh Galmudug.
Guddoomiyaha Baarlamaanka maamulka Galmudug Cali Gacal Casir ayaa sheegay in isaga iyo Madaxweyne ku xigeenka (Carabey) ay yihiin xabsi guri, kuna baaqeen in arrintan wax laga qabto.
Arrintan ayaa waxa ay ka dambeysay kadib markii Madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaalle Geelle (Xaaf) uu tageeray xulufada Sacuudiga, taasina ay ka soo horjeesteen Madaxweyne ku xigeenka iyo Guddoomiyaha Baarlamaanka, halkaasina ay ka bilaabatay xiisada.
Warar madax banaan ayaa waxa ay sheegayaan in maanta magaalada Cadaado ay tagayaan xildhibaano ka tirsan labada Gole ee Dowladda oo ka soo jeeda degaanada Galmudug, si xiisadan ay u qaboojiyaan.
Dhanka kale War saxaafadeed ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Gudaha Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay waxaa looga hadlay xiisada siyaasadeed ee ka taagan magaalada Cadaado.
Warkan qoraalka ah oo ka koobnaa ilaa Afar qodob ayaa Dowladda Federaalka waxay sheegtay in ay ka wallaacsan tahay xasaradaha amni iyo siyaasadeed ee maalmahan ka soo cusboonaaday magaalada Cadaado.
Dowladda ayaa waxa ay sheegtay in ay cambaareyneyso falalka aanan waafaqsaneyn sharciga iyo hannaanka dimoqraadiga ee lagu xayiray dhaqdhaqaaqyada Madaxweyne ku xigeenka, Guddoomiyaha iyo Guddoomiye Kuxigeenka 2aad ee Baarlamaanka GalMudug, waxeyna ku baaqday in si deg-deg ah xorriyadooda loogu soo celiyo si ay u gutaan waajibaadkooda dastuuriga ah.